अन्धा प्रेमी पाउँदा खुशी महिला ! खुलाइन् चार फाइदा - Babal Khabar
एजेन्सी । दृष्टिविहीन प्रेमी पाएपछि एउटी महिला निकै खुशी छिन् । उनले टिकटकमा भिडियो बनाएर दृष्टिविहीन प्रेमीका फाइदाहरू वर्णन गरेकी छिन् । यी महिलाको नाम निया एस्पेरन्जा हो ।
नियाले टिकटकमा एउटा भिडियो पोस्ट गरेकी छिन् र अन्धा प्रेमी पाउनु भाग्यको कुरा हो भन्ने पाँच कारण बताइन् । निया एस्पेरान्जाले आफ्नो भिडियोमा भनिन्, ‘म आज तपाईँलाई बताउन चाहन्छु किन अन्धा प्रेमी पाउनु भाग्यको कुरा हो । यी पाँच कारणहरू छन् ।’
नम्बर एक – ‘उसले अरू केटीहरूलाई कहिल्यै हेर्दैन, त्यसैले यदि तपाइँ आफ्नो सम्बन्धमा यो चाहानुहुन्छ भने, अन्धो व्यक्ति खोज्नुहोस् ।’
नम्बर दुई – ‘म कस्तो देखिन्छु, त्यसले फरक पार्दैन र विशेष गरी मलाई मेरो कपाल मिलाउन आवश्यक छैन ।’
नम्बर तीन – ‘अन्धो प्रेमी हुनु पनि फाइदाजनक छ किनकि उसको लागि किनेको कुनै उपहार लुकाउनु पर्दैन, जुन धेरै जोडीहरुको साझा समस्या हो ।’ नम्बर चार – ‘कहिल्यै पछाडि सिट ड्राइभिङ गर्नुपर्दैन ।’
नियाको भिडियो क्लिप सयौंले हेरेर प्रतिक्रिया दिएका छन् । एक प्रयोगकर्ताले लेखे – मलाई तिम्रो हाँस्य मन पर्छ । तर, कतिपयले नियाको सेन्स अफ ह्युमरलाई पनि निशाना बनाएका छन् । एकजनाले लेखेका छन् – के तपाईँलाई अन्धोपना वरदान हो भन्ने लाग्छ ? यो रोचक छ । यो पनि पढनुस,
एजेन्सी । भारतीय–अमेरिकी उद्यमी मनिष सेठीले फेसबुक खोल्दा हरेक पटक उनलाई थप्पड हान्नका लागि एक महिलालाई जागिरमा राखेका छन् । लगाउन योग्य उपकरणको ब्रान्ड पावलोकका संस्थापक सेठीले कारा नामकी एक महिलालाई उनको स्क्रिन हेर्न र सोसल मिडिया प्लेटफर्ममा गएको खण्डमा उनलाई थप्पड हान्नका लागि ८ डलर प्रति घण्टाका लागि काममा राखेका हुन् ।
फेसबुकजस्ता सोसल मिडिया प्लेटफर्मको लतबाट छुटकारा पाउनका यी युवकले लागि सन् २०१२ देखि नै एक महिलालाई जागिरमा राखेका छन् । तर यसको चर्चा आज यसकारण भइरहेको छ किनभने ९ वर्षपछि टेस्लाका सीइओ अर्थात् संसारका सबैभन्दा धनी एलन मस्कले दुईवटा ‘फायर’ इमोजीको प्रयोग गरेर यसमाथि प्रतिक्रिया दिएका छन् । सेठीले सन् २०१२ को विज्ञापनमा लेखेका थिए, ‘जब म आफ्नो समय बर्बाद गरिरहेको हुन्छु तब तपाईंले मलाई कराउनुपर्नेछ र आवश्यकता पर्दा मलाई थप्पड पनि हान्नुपर्नेछ ।’
मनिष सेठीले शंका व्यक्त गर्दै मस्कको प्रतिक्रियामाथि प्रतिक्रिया व्यक्त गरे । सेठीले कारालाई थप्पड हानेर उनको काम गर्ने क्षमता बढाउन मद्दत गरेको श्रेय दिएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘धेरैजसो समयमा मेरो औसत काम गर्ने क्षमता लगभग ३५–४० प्रतिशत थियो । जबदेखि कारा मेरो नजिक बसेकी छिन् मेरो क्षमता बढेर ९८ प्रतिशत भयो ।’यी व्यक्तिले फेसबुक खोल्ने बित्तिकै उनलाई ती महिलाले थप्पड हान्छिन् । यो खबर साभार गरियको हो ।
Prevफेसबुक खोल्ने बित्तिकै थप्पड हान्न कर्मचारी नियुक्त !
nextयी महिला रुखसँग विवाह गर्दै, कारण जान्नु भयो भने पर्नुहुनेछ छक्क !